Raheem Sterling ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ - Myanmar Sports
ချယ်ဆီးအသင်းက Raheem Sterling [ ရာဟင် စတာလင် ] နဲ့ ကစားကွက် ဘယ်လိုချမလဲ?
Raheem Sterling [ ရာဟင် စတာလင် ] ကို ယူရို သန်း ၄၀ ‌အောက်နဲ့ ချဲလ်ဆီးအသင်းက ခေါ်ယူဖို့ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဟင် စတာလင်ရဲ့ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ စာချုပ်ဟာ ၂၀၂၃ ခုနှစ် နွေရာသီမှာ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းဟာ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ကစားသမားကို အခုနွေရာသီမှာ ရောင်းချရမယ် ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ တစ်နှစ်တာအတွင်း သူ့ကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတာကို သိရှိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးအသင်းဟာ တော်တော်လေး အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ ကစားသမားအများအပြားထွက်ခွာသွားပြီး ပိုင်ရှင်အသစ် Todd Boehly [ တော့ဒ် ဘိုလီ ] ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်အောက်မှာ ရောက်ရှိဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
Raheem Sterling [ စတာလင် ] ရောက်လာရင် ချဲလ်ဆီးအသင်း ကစားသမားနေရာ ဘယ်လိုချမလဲ?
ပြောင်းရွှေ့ကြေး ကြီးမားတဲ့ Kepa Arrizabalaga [ ကီပါ အာရီဇာဘာလာဂါ ] ကို ရောင်းထုတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ Edouard Mendy [ အက်ဒဝေါ့ မန်ဒီ ] ကတော့ နံပါတ်တစ် ဂိုးသမားအနေနဲ့ ဆက်လက်ရှိနေဦးမှာပါ။ နည်းပြ Thomas Tuchel [ သောမတ်စ် တူချယ် ] ဟာ နောက်တန်း သုံးယောက် ကစားကွက်နဲ့ ဆက်လက်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပိုင်းအရ စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုခုတော့ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
Antonio Rudiger [ အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ ] နဲ့ Andreas Christensen [ အန်ဒရေ့စ် ခရစ်စတီယန်ဆန် ]တို့ နှစ်ဦးစလုံးဟာ အခုနွေရာသီမှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်နဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ဆီ အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ အသီးသီး ထွက်ခွာသွားကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းခေါင်းဆောင် Cesar Azpilicueta [ စီဇာ အက်ဇပလီကွစ်တာ ] ဟာ အဆိုပါ နှစ်ဦးအတိုင်း အသင်းကနေ မထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါက ညာဗဟိုနောက်တန်းက ဝါရင့်နောက်ခံလူ Thiago Silva [ သီယာဂို ဆေးလ်ဗား ] နဲ့အတူ နောက်တန်း ၃ ယောက်ရဲ့ အလယ်ဗဟိုခံစစ်အနေနဲ့ စ,တင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့စဥ်က စတာလင်။
ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့
လာမယ့် ရာသီအတွက် ချဲလ်ဆီးအသင်းဟာ အနည်းဆုံး ဗဟိုနောက်ခံလူသစ်နှစ်ဦးကို ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ထဲကမှ ဆီဗီလာအသင်းက ဂျူလီစ်ကွန်ဒီကတော့ အသင်းရဲ့ ပထမဆုံးနောက်ခံလူအဖြစ် ရေပန်းအစားဆုံး ကစားသမား ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒဏ်ရာကနေ ပြန်လည် သက်သာလာတဲ့ Reece James [ ရိစ် ဂျိမ်း ] နဲ့ Ben Chilwell [ ဘန် ချီးဝဲ ] တို့ဟာ အသင်းရဲ့ တောင်ပံနောက်တန်း အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွင်းလယ်ဗဟိုမှာ လက်ရှိ အာမခံချက်ရှိတဲ့ ကစားသမားကတော့ Mateo Kovacic [ မတ်တီယို ကိုဗာ့ဆစ် ] ဖြစ်ပါတယ်။
N’Golo Kante [ အန်ဂိုလို ကန်တေ ] နဲ့ Jorginho [ ဂျော်ဂျင်ညို ] တို့ဟာ အခုအခါ အသက်သုံးဆယ်ကျော်ရှိနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လန်ဒန်အသင်းနဲ့ သဘောတူညီချက် စာချုပ်တွေဟာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကို ရောင်းချဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့နေရာအတွက် ထိပ်တန်းဗဟိုကွင်းလယ်လူတစ်ဦးကို ခေါ်ယူနိုင်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ စတာလင်နဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေ လူစာရင်း။
တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Mason Mount [ မေဆင်မောင့် ] ( *သူ့ကိုယ်ပိုင်စာချုပ်အရ နှောင့်နှေးနေပေမယ့် ) တစ်ဦးတည်း ‌အထောင် တိုက်စစ်မှူးကိုပံ့ပိုးရာမှာ Sterling [ စတာလင် ] နဲ့ ပူးပေါင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အင်တာမီလန်အသင်းကို အငှားနဲ့ ပြန်သွားတော့မယ့် တစ်ကိုယ်တော် အထောင်တိုက်စစ်မှူး Romelu Lukaku [ ရိုမီလူ လူကာကူ ] တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးသစ်တစ်ဦးကို ခေါ်ယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိပေမယ့် Kai Havertz [ ကိုင်ဟာဗတ်ဇ် ]ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ နံပါတ် (၉) နေရာမှာ ဆက်လက်ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စတာလင်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့က ဘာစီလိုနာကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ရာဟင် စတာလင် ဟာ မန်စီးတီးကနေ ချဲလ်ဆီးကို အမှန်တကယ် ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ သဘောတူညီချက်က ဘာစီလိုနာရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စအတွက် ကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗားကို ဘာစီလိုနာက ကမ်းလှမ်းထားတာ ရှိပါတယ်။
ကလပ်ဘရုချ်ဘက်ကို ဂိုးသွင်းယူနေတဲ့ စတာလင်။
ဘာစီလိုနာအသင်းဥက္ကဌ ဂျိုဝမ် လာပေါ်တာက မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကနေ ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗားဟာ သူ့ရဲ့ အသင်းနောက်ထပ်ပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက် အဓိကအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗားကို ခေါ်ယူနိုင်မှာလား?
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗားဟာ ဂွာဒီယိုလာရဲ့ မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းမှာ အဓိက ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပွဲစဥ်တိုင်းနီးပါး ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် တကယ်လို့ စတာလင်သာ ချဲလ်ဆီးအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားမယ်ဆိုရင် ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗားက မရှိမဖြစ်ပုံစံ ပိုပြီး အရေးပါသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်ရှိမှာ ဆေးလ်ဗားကို အစားထိုးနိုင်မယ့် အစားထိုးမှုမျိုး မရှိတာကြောင့် မန်စီးတီးက သူ့ကို အခုအချိန် ထွက်ခွာဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်။
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဘက်ကို ဂိုးသွင်းယူနေတဲ့ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗား။
ဆေးလ်ဗားဟာ ခြေစွမ်းကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အသင်းနဲ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အထိ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာကြောင့် သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခု လိုအပ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်ကလပ်အသင်းဟာ လက်ရှိမှာ ငွေကြေးပြသနာတချို့နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဘာစီလိုနာကို ဆေးလ်ဗားပြောင်းရွှေ့မှုဟာ သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေအရ အမှန်တကယ် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ခံစားလာရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စတာလင်သာ ချဲလ်ဆီး ကို အပြောင်းအရွှေ့ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ ဆေးလ်ဗားကို ခေါ်ယူဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေက တော်တော်လေး ‌အလှမ်းဝေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
← Vitinha ကို ဘယ်အသင်းတွေက ခေါ်ယူကြမလဲ?
Mane [ မာနေး ]ကို ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ ဘိုင်ယန်။ →